Magnetik Fixing efere Manufacturers & Suppliers - China Magnetik Fixing efere Factory
Neodymium Igwe Ọdụdọ
Magnetik Filtration System
Sistemụ Shutter Magnet
Shuttering Igwe Ọdụdọ
Mbadamba Igwe Ọdụdọ
Precast Concrete Ngwa
Sistemụ Njide Magnetik
Ite Igwe Ọdụdọ
Rubber ntekwasa Igwe Ọdụdọ
Portal Ijikwa Magnetik Lifter maka Metal Ibé akwụkwọ
Portable adịgide Magnetik Hand n'ile maka Transshi ...
Threaded Bushing Igwe Ọdụdọ maka Precast Concrete Embedde ...
Nkuku Igwe Ọdụdọ maka Ijikọ Magnetik Shuttering Sys ...
Ijide nju maka ịgbasa arịlịka Ọnọdụ & ...
1.3T, 2.5T, 5T, 10T Steel ezumike ezumike kpụrụ Igwe Ọdụdọ N'ihi An ...
0.5m Ogologo Magnetik Shuttering Profaịlụ Sistem
2100KG, 2500KG Anam Udeme Force Precast Concrete Igwe Ọdụdọ ...
1350KG, 1500KG ofdị Magnetik Formwork System
900KG, 1Ton Box nju N'ihi Precast tilting Isiokwu Mo ...
Oghere Magnetik Square
Liquid Trap Igwe Ọdụdọ na Flangle Connection Type
Ijide Igwe Ọdụdọ Maka Ubube Pilot
Ngwaọrụ na-adọrọ adọrọ Magnetik
Ngwakọta Ngwakọta Magnetik Gburugburu
Akụkụ anọ Igwe Ọdụdọ nke Ferrous Na-ewepụta
Ike Igwe Igwe Igwe Igwe
ABS Rubber Dabere Now nju maka n'ọnọdu agbakwunyere ịkwanyere Pipe on Steel Formwork
ABS Rubber Based Round Magnet nwere ike idozi ma debe Plọg PVC agbakwunyere n'ụzọ ziri ezi ma sie ike na nchara ígwè. Tụnyere nchara magnetik gwara efere, na ABS roba shei bụ mgbanwe ona anwụrụ n'ime diameters kasị mma. Enweghị nsogbu na-agagharị ma dị mfe iwepụ.
Threaded Bushing Igwe Ọdụdọ maka Precast Concrete agbakwunyere na-eweli Socket
Threaded Bushing Magnet nwere ike magnetik na-agbakwunye ike maka oghere ndị na-ebuli elu na mmepụta ihe eji eme ihe, na-ewere ọnọdụ ịgbado ọkụ oge ochie na njikọ njikọ njikọta. Ike sitere na 50kg ruo 200kgs dị iche iche na eriri eri dị iche iche.
Ijide nju maka ịgbasa arịlịka Ọnọdụ & Idozi
The ejide nju-eje ozi maka n'ọnọdu na idozi mgbasa na-eweli arịlịka na ígwè formwork. A na-atụgharị mkpara abụọ milled n'ime ahụ efere magnet, iji mee ka okpuru ulo roba dị mfe mgbe ị na-etinye.
Magnetik efere njide na-agbanwe agbanwe Eriri-Pin maka idozi Socket Igwe Ọdụdọ D65x10mm
A na-emepụta ndị na-ejide efere magnet iji fanye ntọala ndị nwere eri, aka uwe na panel ihe na nchara ígwè. Igwe Ọdụdọ nwere ezigbo stromg adhesion Njirimara na-eweta arụmọrụ, ogologo oge na-adịgide adịgide.
1.3T, 2.5T, 5T, 10T Steel ezumike bụbu Igwe Ọdụdọ N'ihi Anchor gwara
A na-eji igwe eji eme ihe eji edozi igwe maka edozi ihe na-ebuli arịlịka n'akụkụ akụkụ, kama ịghasa ọdịnala ọdịnala nke mbụ. Ọkpụkpụ ọkara na oghere oghere etiti na-eme ka ọ dị mfe iwepụ na panel mgbe ị na-agbanwe.
Steel Magnetik Triangle Chamfer L10x10, 15 × 15, 20 × 20, 25x25mm
Steel Magnetik Triangle Chamfer zuru oke na-enye ntinye ngwa ngwa na nke ziri ezi maka imepụta akụkụ beveled na nkuku na ihu nke mgbidi mgbidi na-arụ ọrụ na nchara nchara.
M16, M20 Fanye Magnetik Fixing efere maka agbakwunyere Socket fixing na eweli System
Etinyela Igwe Igwe Ntugharị Ntugharị maka maka idozi agbatị agbatị na mmepụta ihe eji eme ihe. Ike nwere ike ịbụ 50kg na 200kgs, dabara maka arịrịọ pụrụ iche na ike ijide. Eriri dayameta nwere ike ịbụ M8, M10, M12, M14, M18, M20 wdg.
Olee otu esi emepụta Sintered Neodymium Magnets?
Sintered NdFeB magnet bụ ihe magnetị nke sitere na Nd, Fe, B na ihe ndị ọzọ dị na ígwè.Ọ bụ nke kachasị na ndọta, ezigbo ike mkpali. A na-eji ya eme ihe na obere igwe, ...
Right Copyright -Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd. Ogbogu 2020. Ikike niile echekwabara.